Izinkampani Zokuhwebelana Kwezinhlu Zemininingwane Ye-RealtyWW Info - Ukukhangisa Kwezezakhiwo
Ama-Continuication Abahlanganyeli be-RealtyWW Info - Inethiwekhi Yezentengiso Yezindawo Zokuhlala Umhlaba wonke
July 01, 2017 by realWW, Ukubukwa okuphelele:
Ukuqinisekisa ukuboniswa okuphezulu kakhulu kohlu lwakho oluthunyelwe kwiwebhusayithi yethu uhlelo lwethu luzisabalalisa ngokuzenzakalela kuma-aggregator amakhulu nezinhlelo zokucinga zomhlaba. Ngezansi ungathola uhlu lwabalingani bethu amawebhusayithi:
Claz.org iyi-database ehlukanisiwe. Ngemuva kwezinyanga ze-10 zokuthuthuka nokuhlolwa kwe-beta Claz.org manje isilungele ukuvala igebe phakathi kwabathengi abazimele nabashicileli bezikhangiso ngokuletha imiphumela kusuka kumasayithi aqokelwe ukwedlula i-200, amaphephandaba endawo nezinkundla. Ihlose ukuthatha ukusesha nokuphequlula ngezigidi zohlu ukufakwa ezingeni elilandelayo ngokuhlanganisa izici eziningi ezilusizo eziqondene nokuqukethwe kwezikhangiso okufakwe kusigaba.
I-Oodle.com iyindawo yemakethe eku-inthanethi esekelwe eSan Mateo, eCalifornia. Yasungulwa e-2004 ngabaphathi be-ex-Excite Craig Donato, uScott Kister noFaith Sedlin. I-Oodle njengamanje iqoqo elikhulu kunawo wonke, futhi ihlanganisa ukufakwa ohlwini kusuka kumasayithi afana ne-eBay, ForRent.com, BoatTrader.com, kanye nohlu lwasendaweni olusuka kumaphephandaba endawo namawebhusayithi. U-Oodle uhlanganisa uhlu oluvela emithonjeni yezwe neyasekhaya, emboza ngaphezu kwezifunda ze-1000 e-United States, UK, Canada, Ireland, naseNdiya.
locanto.com isayithi elibekiwe emazweni angaphezu kwe-60 emhlabeni wonke okwenza ukuthengisa noma ukuthenga endaweni kujabulise. Ifenisha esetshenzisiwe, izimoto, amakamelo, ngisho nezifundo zesiginci - Yisitolo sokuma esisodwa ukufinyelela emphakathini wakho futhi ugcine / wenze imali ngokushesha!
Askalo.com i-Askalo iyinjini yokusesha ehleliwe yezezakhiwo, izimoto nezigaba zemisebenzi emhlabeni wonke. I-Askalo iyinjini yokusesha izimoto, imisebenzi kanye namakhaya. Sisebenza ngokubambisana namasayithi ahleliwe kuwebhu yonkana ukukulethela yonke izikhangiso oyofuna ukuzibona kusesho olulodwa nje.
On Askalo ungenza usesho oluthile olunikeza imiphumela efanele. Futhi-ke ungaqhathanisa okunikezwayo bese uthola inani elihle kakhulu ngobuningi bezinketho obekelwe zona.
I-Worldpropertyjournal.com isezindabeni zezindawo ezithengiswayo nezokwaziswa - emhlabeni wonke.
Ngamahhovisi ezinkampani kuzo zombili iMiami, eFlorida nase-Irvine, eCalifornia, i-WPJ ifundwa emhlabeni jikelele 'iphephandaba elingunobumba wedijithali' elishicilela, lisabalalise futhi lihlanganyele nsuku zonke izindaba zemakethe zokuhlala, ezentengiso nezokuvakasha. emhlabeni wonke.
I-World Property Journal okwamanje isayithi le- #1 elibekwe 'Global Real Estate News' emhlabeni namuhla ngabakwaGoogle nabanye abaningi.
I-Globalistings.com iyindawo ekhula ngokushesha yohlu lwezinto eziku-inthanethi ezikhula ngokushesha esivele isibalo #1 ngokomzimba zibekwe Uhlu Lwezakhiwo Zomhlaba isiza emhlabeni namuhla ngabakwaGoogle! Ngoba siphila emhlabeni oxhumeke kakhulu emhlabeni jikelele, inhloso yethu ukusiza ukuxhumana nabathengi bezindlu, abatshalizimali kanye nabaqashi emhlabeni wonke nabanikazi bezindlu nabathengisi (bangakini nabomhlaba jikelele) ngendlela ethuthukile futhi esebenza kahle kunanini ngaphambili - ukusondeza ubuchwepheshe nezinhlobo ezintsha zebhizinisi. Emgogodleni wethu - siyinkampani yezobuchwepheshe bezezakhiwo emhlabeni jikelele esizinikezele ekwakheni ukuthenga nokuthengisa okungcono kakhulu okuthengiswayo / ukuthengisa / ukutshala / ukuqasha indawo etholakala noma kuphi emakethe yomhlaba namuhla - nakusasa.
everyhouse.com I-Everyhouse iyinjini yokusesha yezezakhiwo eyenzelwe ukwenza inqubo yokuthola impahla kwi-intanethi ibe lula kumsebenzisi. Imaka ukukhethwa okukhulu kweminikelo etholakala ku-inthanethi kudathabhethi eyodwa ebanzi ngokubonisa uhlu oluvela kumabhodi wezezakhiwo nezindawo ezinkulu zepropathi yendawo. Besebenzisa isikhombimsebenzisi esisheshayo nesiqonde, abasebenzisi bangabuza lo datha bese bezisindisa ngokwabo ukuhambela isiza ngasinye. Iminikelo uqobo lwayo ayihanjiswa yiRoverhouse futhi abasebenzisi bahlala bephindiselwa kuloluhlu lwangempela. Empeleni, i-Allhouse isebenza njengomshayeli wethrafikhi kulezo zingosi. Inethiwekhi yethu yenjini yokusesha ifaka phakathi kwamazwe we-90, enezindawo ezihlukile ezihunyushwe ezilimini ze-28.
global-free-classified-ads.com Izikhangiso ezihlukaniswe mahhala yisayithi lesikhangiso esiku-inthanethi sezakhiwo, izimoto, ithuba lebhizinisi, izikhangiso ezifuywayo, njll. Sebenzisa uhlelo lwethu lokubekwa kwamahhala oluthathwa online ukuthumela izikhangiso zakho zamahhala namuhla!Isiza sihanjelwa ngenkuthalo ngamakhulu abathengi nsuku zonke nabathengisi abavela e-United State, Canada, United Kingdom nakwamanye amazwe Emhlabeni jikelele. Senze umzamo omkhulu wokuqinisekisa ukuthi abathengi bethu kanye nabathengisi ngokufanayo banendawo yokubeka izinto futhi bathola amadili amahle kunenethi. Abathengisi bazothola inqubo elula, yohlu, enekhono lokulayisha izithombe ngohlu lwabo.
ClassifiedAds.com iwebhusayithi yezikhangiso ehlukanisiwe yamahhala yezimoto, imisebenzi, izindlu ezithengiswayo nakho konke okunye. Thola okufunayo noma dala isikhangiso sakho mahhala! Ngokungafani namanye amawebhusayithi amaningi ezikhangiso ahlukaniswa, ClassifiedAds.com is 100% free to use. Kumahhala ukuthumela isikhangiso, mahhala ukubhekabheka ukufakwa kuhlu, mahhala ukuxhumana nabathengisi. Sitshala isikhathi esiningi nomzamo wokubheka nokuhlunga okuqukethwe okuthunyelwe kuwebhusayithi, ngakho ungaqiniseka ukuthi uzothola kuphela ikhwalithi, uhlu olufanele. Umgomo wethu ku- ClassifiedAds.com ukukwenza kube lula ukuthenga noma ukuthengisa noma yini.
renjungle.com I-Rent Jungle iyinjini ehamba phambili yokusesha eku-inthanethi yezindlu eziqashisayo. Isungulwe ku-2010, isiza sakhiwa ngokuphendula igebe emakethe: yayingekho indlela elula, engenazhlungu yokuthola konke ukufakwa ohlwini lwezindlu endaweni eyodwa. I-Rent Jungle izimisele ukukulungisa lokhu, ikwenze kube yinjongo yethu ukusiza abazingeli bamafulethi kanye nabaphathi ukuba badabule "ihlathi" eliku-inthanethi lezindlu eziqashisayo futhi ekugcineni baxhumeke kalula.
cheapapartmentslocator.com Yethulwe ngoMeyi we-2011, i-Cheap Apartments Locator indawo enhle kunazo zonke online ukuthola amafulethi ashibhile nezindlu eziqashisayo. Silapha ukwenza ukuzingela efulethini kube lula futhi kube mnandi, futhi sihlala silungiselela ukuthola izindlu ezingabizi kuwe.
rentallhouses.com Ukuqasha Zonke Izindlu kuyindawo yokuqala yokuthola izindlu eziqashisayo online. Isayithi linikeza ukufakwa kuhlu okuningi ukukusiza ekutholeni ikhaya lakho elisha ngokushesha, futhi kwenza ukuxhumana nokuhamba ungene ekhaya lakho elisha lishaywa umoya. Usebenzisa ubuchwepheshe benjini lokucinga, Ukuqasha Zonke Izindlu kuseshela uhlu lwezindlu olungcono kunazo zonke, ukuhlunga izindlu namafomu athengiswayo, futhi kubeka yonke into ekusetshenzisweni kwemephu okulula ukuyisebenzisa. Ngokunciphisa usesho lokuqasha amakhaya kuphela, uthola ukufakwa kuhlu okuhle kuphela ukukusiza ekutholeni ikhaya elisha.
I-Rayasem.com kuyinjini yokucinga ethe xaxa yezikhangiso ezihlukaniswe, okwamanje egxile kwizakhiwo futhi maduze nje izovula ama-verticals amaningi njengezimoto nemisebenzi. Njengamanje osebenza e-Indonesia kungekudala uzokwethula kwamanye amazwe aseNingizimu mpumalanga ye-Asia, i-Europe neLatin America. URayasem wasungulwa ngoMeyi 2017, futhi uhlala eJakarta, Indonesia. Kuyisitha esibonakalayo esinobasebenzisi sisebenzisa umbhalo wamahhala, umsila omude nokusesha okusekelwe endaweni.
flatfy.com Ibizwa ngokuthi uFlatfy, insizakalo iyinjini yokucinga yokuthengisa amafulethi nokunikezwa kokuqasha, abasebenzisi bayakwazi ukuhlunga imiphumela ngentengo, indawo, indawo, nezinye izici. Insizakalo ihlanganisa amazwe we-10 kuze kube manje, enye i-15 ihlelelwe ukuza online kungekudala.
Imisebenzi ye-Adzuna kuyinjini yokucinga yemikhangiso yemisebenzi ebala yonke imisebenzi, yonke indawo. Umsebenzi wethu ukuthi ube yindawo engcono kakhulu yokuqala ukufuna umsebenzi. Sesha izinkulungwane zamawebhusayithi ngakho-ke akudingeki ukuthi uhlanganyele izigidi zemikhangiso ukuze uthole wonke umsebenzi, yonke indawo, nge-Adzuna. Sinikeza ngezinketho zokucinga ezihlakani nemininingwane enamandla emakethe yemisebenzi, sikunikeze imininingwane oyidingayo ukulawula umsebenzi wakho.
Yiba umlingani wethu wokufakwa ohlwini
Ukuze ube ngumlingani wethu wokuvumelanisa futhi uthole okuphakelayo kwe-xml sicela usithinte kuleli kheli le-imeyili [Email protected]
realWW July 1, 2017
Le entry safakwa ngo Ukukhangiswa Kwezezakhiwo futhi umake Ukusabalalisa kuhlu, Ukufakwa ohlwini kohlu, Uhlu lwamawebhusayithi we-Syndication Eeal Estate, Ukuthengiswa Kohlu Kwezezakhiwo, Isevisi Yokuthengisa Ukuhwebelana Kwezezakhiwo, Ukuthengiswa Kwezezakhiwo, Amawebhusayithi Okuthengiswa Kwezakhiwo. Bookmark Permalink.
June 6, 2016 Mayelana ne-realtyWW - I-Real Estate Free Advertising Network WorldWide realtyWW iwebhusayithi yamanye amazwe okukhangisa izindlu nomhlaba. Ngenxa ye- "realtyWW" ungathenga kalula, uthengise, uqashe futhi uqashe izakhiwo emhlabeni wonke, ngaphandle kwendawo yakho. Kungaba yi-USA, Canada, UK, Ireland, Australia, Philippines, Singapore, India, New Zealand. Isici esiyinhloko se-realWW, inethiwekhi yamahhala yokusabalalisa uhlu. Lapho zonke izikhangiso noma i-athikili isabalalisa kuma-medias omphakathi mahhala. Lokhu kungandisa kakhulu ukuguqulwa kokukhangisa uma […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
April 21, 2019 Imithombo yedatha esekelwayo (abahlinzeka ngempahla yokuthenga izindlu) Uma udinga ukudala ukuphakelwa kwedatha ukuze usebenzise insiza yethu yokuvumelanisa ungacela enye yalezi zinkampani ezilandelayo ukuthi zikwenzele yona: Ama-XML2U feeds amukelwa ngamaphothali amaningi, Classifieds, verticals, media social, izinhlelo zokusebenza namanye amapulatifomu okukhangisa azungeze emhlabeni kunanoma yikuphi okunye okuphakelayo. Ukuthola isikhathi sokwengeza ukufakwa ohlwini lwakho kumapulatifomu amaningi okuthengisa, kube yinkinga yangempela. Isixazululo ukuphana kwedatha kusuka ku-XML2U. Okuphakelayo okukodwa konke okudingayo. Bheka ezinye ze- […] Posted in Ibhizinisi Lezakhiwo
September 1, 2016 Uhlu Lwezakhiwo. Inethiwekhi yamazwe omhlaba - realtyWW realtyWW iwebhusayithi yamanye amazwe okukhangisa izindlu nomhlaba. Ukuthumela uhlu lwezezakhiwo sicela ulandele leli khasi Abanikazi, abafisa ukuheha ukunakwa okukhulu kohlu lwabo lwezezakhiwo, bavame ukunaka kakhulu imibono yokudala futhi abacabangi ngokunemba kokuhlanganiswa kohlu. Lo mbhalo ukutshela ngezinto ezibaluleke kakhulu lapho ubhala uhlu lwezezakhiwo. Ungabhala kanjani uhlu lwezezakhiwo. Isisekelo sezisekelo Umbhalo wanoma yikuphi kwangempela […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
October 12, 2017 Ungazisungula Njani Njengommeleli Wezezakhiwo: Siphila ezweni eligcwele abantu abaningi, babelana ngemibono efanayo nathi, ukuthi kungenzeka ukuthi abantu bancintisane namakhasimende namakhasimende. Lokhu kuyafana nakubantu emhlabeni wezezakhiwo. Kunezinhlangano eziningi ezizimele eziningi nezinkampani ezinkulu ezinikezelwe ekuthengisweni kwezezakhiwo nasekudluliseleni, abantu basesimweni lapho benesikhathi esinzima sokuzisungula futhi nokwazisa ngezinsizakalo zabo kubathengi abangaba khona. Lapha […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
September 30, 2016 Kungani Udinga Izinsizakusebenza Zokushicilela Izakhiwo? Kungani uludinga ngempela? Ngabe izinsizakalo zokubhala ngokuthengiswa kwezakhiwo ziyingxenye edingekayo yokuthuthuka kwebhizinisi kwi-Intanethi, ukukhushulwa kwamasayithi, noma, ngakho-ke, ukuxhumana okungadingekile, okuphakelayo kwabafowethu abahlukahlukene ababhali, okuvame kunethiwekhi yomhlaba wonke? Kungenzeka ukuthi bayawusekela impela umbono wokuthi izinsiza zokubhala phansi kwezakhiwo ziyadingeka, kepha empeleni ungakwenza ngaphandle kwalokhu "okunethezeka"? Kepha ake sicabange ngesimo somqondo, futhi esingokomfanekiso […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
September 6, 2016 Izikhangiso zeBanner ezishibhile kuma RealtyWW aphesheya kwezwe realtyWW iwebhusayithi yamanye amazwe okukhangisa izindlu nomhlaba. Ukukhangisa ngezikhangiso ezingama-banner ezingabizi kuwebhusayithi yethu sicela ulandele leli khasi ukukhangisa kwe-Intanethi - yilokhu okuletha imali eyisisekelo neyangempela. Yazala izixazululo ezahlukahlukene zentengiso zenethiwekhi, ivusa abatshalizimali kanye nabathuthukisi. Inezikhombisi nezinhlobo eziningi futhi impela yingxenye eyakha futhi eshintsha kakhulu ye-Intanethi. Le ndatshana yincazelo eyodwa kuphela yayo […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
September 2, 2016 Izinhlu Zendlu. Khangisa mahhala - realtyWW i-realtyWW iwebhusayithi yamahhala yokuthengisa izindlu nomhlaba. Ukuze uthumele ukufakwa ohlwini lwendlu sicela ulandele leli khasi Ukuze uthengise indlu ngokushesha nangesilinganiso esiphakeme, ukuze ungazithobi imali yokugibela kulabo abakhwabanisa, kuzodingeka wenze uhlu lwendlu olunekhono. Kulesi sihloko, ngeke sibhekane nezinkinga zokulungiswa kwendlu ngaphambi kokuthengisa njll, futhi sizokhuluma kuphela ngohlu lwezindlu (sicabange ukuthi uyazi ngokubaluleka kokulungiswa kwendlu ngaphambi kokuthengisa). Ukuthengisa […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo